ख्याल गर्नुहोस् है ! माघ २ बाट काठमाडौंको यी स्थाानमा गाडी गुडाउन पाइँदैन « News24 : Premium News Channel
ख्याल गर्नुहोस् है ! माघ २ बाट काठमाडौंको यी स्थाानमा गाडी गुडाउन पाइँदैन
काठमाडौं । काठमाडौंका मुख्य भित्री शहर भित्र माघ २ गतेदेखि चार पांग्रे र त्योभन्दा ठूला सवारी प्रवेश निषेधको घोषणा गरिएको छ । कतिपय सडकहरुमा वान वे सिस्टम लागू हुँदैछ ।
भित्री शहरमा सवारीको चापले परेको असरहरु कम गर्न चारपांग्रे गुडाउन लगाउन लागिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले जानकारी दिए । आज पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर यो जानकारी दिइएको हो ।
नरदेवीबाट भेडासिंह हुँदै इन्द्रचोकसम्म वान(वे गरिएको छ । टेंगालबाट बाङ्गेमुढा हुँदै भेडासिंह, इन्द्रचोक पनि एकतर्फी गरिएको छ । क्षेत्रपाटीबाट ठहिटी हुँदै नघःल बांगेमुढा भेडासिंह हुँदै इन्द्रचोकसम्म वान वे गरिएको छ ।